Biilashaad ku bixi wakhti | Hallå konsument - Konsumentverket
Ku cusub Swiidhan: Biilashaad ku bixi wakhti
Haddii aad wax iibsato adigoo aan isla markaaba bixineyn, waxaad heli doontaa biil (räkning) wakhti xaddidan ka dib. Biilka waxa kale oo loogu yeedhi karaa fatuurad (faktura). Biilasha waxay ku iman doonaan boostada ama emaylka, iyagoo siyaabo kala duduwan u eekaan kara.
Marka aad hesho biil, waa inaad hubiyo:
Inaad xaqiiq ahaan dalbatey shayga.
In qiimahu sax yahay.
Taariikhda lacagbixinta la sameynaayo ugu danbeyn.
Waa inaad bixiso biilashaada iyadoo ay muhiimna tahay inaad wakhti ku bixiso. Meel biilka ka mid ah, ayay kuu sheegi doonaa taariikhda ugu danbeyn lacag bixinta la sameynaayo. Caadi ahaan, waxay odhan doontaa taariikhda kama danbeysta e lacag bixinta (sista betalningsdag) ama taariikhda uu dhacaayo (förfallodatum). Haddii aand wakhti ku bixin, waxay taasi kuu keeni kartaa dhibaatooyin waaweyn. Ta koowaad, inta aad bixinaysaa waa ay ka badnaan doontaa. Sidoo kale. haddii aad biil isku mid ah wakhti ku bixin weydo ayaa deyntaada loo gudbin doonaa Hay'adda Fulinta ee Iswiidhan (Kronofogden). Deyntaas waxay adiga kugu adkeyn doonta inaad noqoto muwaadin Swiidhish ah.
Haddii aanad biilashaada kirada hoygaaga bixin ayaa guriga lagaa saari/eryi doonaa. Taas micnaheedu waxa weeye waxad lumin doontaa heshiiskaaga guriga iyadoo qasab ay kugu noqon doonto inaad guurto. Haddi guriga lagaa eryey, waxa kugu adkaan doonta inaad guri cusub hesho.
Waxa jira biila aan inta badan iman. Haddii, tusaale ahaan aad leedahay TV, waa inaad bixiso fiiga raadyowga iyo telefishanka (radio- och tv-avgift). Lacag bixintaa waxa caadi ahaan la sameeyaa hal mar ama afar jeer sanadkii.
Haddii uu qalad ku jiro biilka
Miyuu kuu soo dhacay biil qalad ku jiro? Haddii ay sidaas tahay, waa inaad u qorto shirkada kuu soo dirtey biilka. Warqadaada ama emaylka ugu sharax in aanad rabin inaad bixiso, iyadoo aad u sheegayso sababta aanad taas u sameyneyn. Taas waxa loo yaqaanaa ka doodida (bestrida) biil. Markasta keydso nuqul wax kasta oo aad uqorto ama udirto shirkada.
Miyaad caawimo uga baahan tahay inaad ka doodo biil? La xidhiidh la taliyayaasha miisaaniyada iyo deynta (budget- och skuldrådgivare) ama la taliyaha macaamiisha (konsumentvägledare) ee kamuunkaaga.